သက်ဦး: ရေခဲထဲမှာ ပိုက်ဆံရှာ
Posted by Thet Oo at 7:28 AM
ဒီလိုလား ကျနော်က ရေခဲရှင်းတဲ့ အလုပ်များလားလို့။
အော်..။ယောက်ဖဆိုးတာများ ကြေငြာနေရသေးဗျာ။ ဒီလိုလုပ် လို့ တော့ မရဘူးဗျ။ ကျုပ်မှာလည်း ယောက်ဖ ဆိုး ဆိုးရှိတယ်။
ဆက်ပြီးရေးပါဗျာ။ အားပေးပါတယ် ။ဘဝတွေကိုသိရတယ်။ ရင်ခုံသံတွေကို ကြားရတယ်။ အကျိုးရှိတဲ့ အလုပ်ပါ။
ကျနော်တောင် ဟိုနေ့ က ဆိုင်ကယ်မှောက်သေးတယ်ဗျ...ရေခဲထပြင်မှာဘဲ...
ဘာမှကိုအနာကျင်ဘူး...မထိခိုက်ဘူးဗျ...မွှေ့ ယာထဲ လှဲချလိုက်သလိုဘဲ...
ပဌာန်းက အိမ်ကထွက်ကတည်းက ရွတ်နေလို့ ....
ကိုသက်ဘလော့ဂ်ကိုလဲ ကျနော် လင့်ခ်ထားတယ်နော်...
ကျနော်လည်း ရေခဲထဲ ကားမောင်းခဲ့ဖူးတာပေါ့ ရေခဲထဲ ကားမောင်းရတာလည်း စိတ်ညစ်စရာကြီးဗျ....
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကားတစီး ရပါစေဗျာ....
ကသက်ဦးတို့ ဒိန်းမတ်က ဘဝတွေ လာဖတ်သွားပါတယ်၊ ကသက်ဦး ကွန်မန့် ပွတ်သွားတာ ကိုဖြေရယင် ကျနော်က အမေရိကားက Hi Tech နဲ့ ဒီပလိုမာ ရထားတာပါ မိသားစုနဲ့ ကျန်နေတဲ့ ဗမာပြည်က မောင်နှမတွေ အတွက် ဘွဲ့ယူဖို့ အတွက် ကုန်ကျမဲ့ ငွေတွေအတွက် ချီတုန်ချတုန် ဖြစ်နေရသူပါ၊ အခု ကုမ္မဏီမှာ ကွာလတီ ကွန်ထရိုး ဆူပါဗိုက်ဆာပါ၊ ကုမ္မဏီအတွက် မရှိမဖြစ် ကျိုးပမ်းထားသူပါ၊ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ပိုင်မလုပ်နိုင် သရွေ့ ကျွန်ကတော့ ကျွန်ပါပဲဗျာ။
ဒိန်းမတ်က မောင်ရေခဲ ပုံပြင် လာဖတ်ယင်းနဲ့ အကိုပွတ်ခဲ့တဲ့ ကွန်မန့်လာဖြေသွားတယ်၊ ကျနော်က အမေရိကားက HI-Tech ဒီပလိုမာ ရထားပြီး အခုကုမ္မဏီမှာ ကွာလတီ ကွန်ထရိုး ဆူပါဗိုက်ဆာပါ၊ လုပ်သက် ၄နှစ်ပါ၊ သူများ အလုပ် လုပ်နေသရွေ့ကတော့ ကျွန်ကတော့ ကျွန်ပါပဲဗျာ။
Ko Thet Oo,
I thought I had bad time in winter rain ridding motorbike. After I read you essay, I realized that every Burmese immigrants around the world have been struggling to survive and feeding their family. I'm proud of you. I wish you safe trips in winter.
Yes, I agree with you Ko Nyi Pu. By the way, let me know if you haveablog.
Dear Ko Thet Oo, Nay Kaung Lar, Actually is not easy to walking n working on the Ice if your not use to it. U know what I means..:o))
Agree. Most of the immigrant burmese in europe are still not used to the weather and foods no matter how long they have been. Here in NL, most burmese use bicycle for daily transport. You can imagine how the body becomes numb after cycling for 30min in the cold and chill winter. Anyway wish you haveaconfortable car soon and haveasafe winter.